Cambaaraynta Caalamka - BBC News Somali
Image caption Hotelka Muna ee Shalay la weeraray oo ay ku dhinteen 33 qof
Dalka Norway, waddanka Maraykanka, hawl galka Midowga Afrika ee Soomaaliya, Midowga Yurub, Urur goboleedka IGAD, Ururka Jaamacadda Carabta, xafiiska siyaasadda Qaramada Midoobay ee Soomaaliya waxay si wada jir ah oo xoog leh u cambaareynayaan weerarrada kooxaha xagjirka ah ay ku hayaan dadweynaha Muqdisho.
Weerarkaas naxariis darrada ah waxaa uu ka socdaa dhowr aag. Waxaa uu isugu jiraa xayiraadda sharci darrada ah ee cuntada iyo gargaarka bani'aadanimada iyo sidoo kale dilka ula kaca ah ee muwaadiniinta Soomaaliyeed ee aan waxba galabsan sidii ka dhacday hotel Muna oo dad badan oo rayid ah lagu laayay.
Waxaan tacsi u direynaa dadka ku dhibaateysan dalka Soomaaliya oo dhan iyo qoysaska iyo asaxaabta dadkii lagu dilay magaalada Muqdisho.
Weerarkan, gaar ahaan bisha barakeysan ee ramadaan, waxaa uu muujinayaa tixgelin la'aan buuxda ee nafta bani'aadamka iyo dhaqanka Soomaalida. Waxaa walaac gaar ah leh joogitaanka dagaalyahannada shisheeyaha ee la shaqeynaya Al Shabaab ee Soomaalida caadiga ah la dagaallamaya.
Waxaa keliya oo sida muuqata ay daneynayaan inay burbur iyo nolol xumo u geystaan dadka Soomaaliyeed.
Kooxaha dagaallamaya, si kastaba ha ahaatee, ma guulaysan doonaan. Habka nabaddu waa ka sii socon doonaa Soomaaliya inkastoo ay kooxo yar oo qaswadayaal ah isku deyayaan inay joojiyaan.
Norway, Maraykanka, AMISOM, Midowga Yurub, IGAD, Jaamacadda Carabta iyo xafiiska siyaasadda Soomaaliya ee Qaramada Midoobay waxay ballan qaadayaan inay sii wadayaan taageerada ay siiyaan dowladda iyo dadweynaha Soomaaliya sidii ay dhaqso nabad waarta ugu keeni lahaayeen dalkooda, mustaqbal rajo lehna u heli lahaayeen